INTEE IN LA CUNO KARIYO HADHUUDH KARSAN: CUNTADA SIDA CUNTADA LOO KARIYO CAWSKA SI AAD U JILICSAN OO CASIIR LEH - KHUDRADDA
Sidee iyo intee in badan oo loo kariyo hadhuudhkii bislaaday? Noocyada iyo talooyin waxtar leh
Galley cadaan ah, wax ka badan 24 saacadood ka hor intaan la karin, waxay leedahay sifooyin dhadhan fiican leh iyo caraf udgoon. Kaabashooyinka noocan oo kale ah ayaa si sahlan loo kariyey, waxay sidoo kale si dhaqso ah u cadayaan ama la dubay.
Laakiin waxa ku saabsan cobs ka badan? Maxaa la sameeyaa haddii cawska iyo "da'da"? Miyuu suurtogal u yahay badbaadinta sheyga? Waa immisa iyo sida loo karsado hadhuudhkii bislaaday?
Si kooban wax ku saabsan sifooyinka dhaqanka
Corn waa badeeco quudin ah oo ka tirsan qoysaska firida. Celceliska dhererka baadiyaha - 3 m, noocyo qaar waxay gaareen dhererka 6 m. Miisaanka qummanaanta - 5-7 cm dhexroorka, waxaa lagu arki karaa noodhadhka adag ee u dhaw in xididka.
Nidaamka asaasiga ah ayaa si wanaagsan loo horumariyaa, waxaa jira xididada taageerada dhulka (koritaankooda waxaa sabab u ah waraabin degdeg ah iyo qoyaan ciid ah oo sarreeya). Ma jirto godeyn gudaha gudaha asliga ah. Caleen waxay leedahay qaab qaabaysan oo qumman, oo gaadhaya 1 m.
Waxaa jira aragtiyo badan oo sharxaya asalka dhaqanka. Waxaa ka mid ah kuwa aan caadi ahayn waa hordhaca abuurka by shisheeye shisheeye. Aragtida cajiibka ah waxaa sababa xaqiiqda ah in hadhuudh uusan ku dhicin duurjoogta oo aan wax tarin. Su'aashu asal ahaan way furantahay.
Isticmaalka hadhuudhku aad ayuu u sarreeyaa sababtuna tahay ka kooban kiimikaad qani ah. Waxaa ka mid ah istaarijka, fitamiinada, isku dhafka walxaha waxtarka leh:
ascorbic iyo folic acid;
saliida muhiimka ah.
Cuntada hadhuudhka ah waxaa loo isticmaalaa daroogada si loo siiyo daaweynta duriinka, choleretic, saameynta anti-bararka. Soo saarista dareeraha wuxuu helaa codsigeeda daaweynta cudurada kala duwan - cagaarshow, cholecystitis, urolithiasis. Jermiska dhirta waxaa loo isticmaalaa ka hortagga diabeteska iyo miisaanka luminta. Saliidda miisaanku waxay maamushaa geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka, waxay caadi u tahay heerarka baruurta.
Noocyada qalfoofka badan
Miraha ka baxsan dhirta ama dhirta ayaa waxay qalajiyeen midho cad oo jaale ah. Markaad ku cadaadineyso, casiirka ayaa u muuqda, laakiin mugga yar. Caleemaha madaxyahanadu waa kuwa cadcad iyo dhuuban. Soo iibso hadhuudh xad dhaaf ah dhamaadka xilli-ciyaareedka.
TALO: Cunto karinta noocaas ah waxay qaadan doontaa waqti dheer - 10-15 daqiiqadood oo ah hadhuudhka dhalinyarada iyo 50 daqiiqo midka hore. Madaxa maqaarka badani waa mid ka sii daray, laakiin qaddarkiisu wuu yar yahay. Si aad u jebiso hagid, waxaad u baahan tahay inaad codsato xoogaa xoog ah.
Sida loo doorto midhaha saxda ah?
Shuruud waa in la iibsado cobs caleemaha, maadaama ay ilaalinayaan casiirka iyo dhadhanka miraha la kariyey. Leaves sidoo kale sidoo kale miro ka ilaaliyo wasakh, qoyaan iyo iftiinka qorraxda. Corn "dharka" markasta way ka fiican tahay.
Xaaladda labaad waa falanqaynta maaddada. Si arrintan loo sameeyo, u dhaqdhaqaaq caleenta waxoogaa fiiri maqaarka. Haddii ay jabaan oo ay ku daboolaan caaryaal, ha iibsan badeecadda.
Maxaa kale oo la bixinayo:
Eeg cabbirka madaxa. Miro iyo raashin macaan waxay leedahay madax yar oo ah hadhuudh iyo macaan.
Waannu dhadhaminaynaa. Sonkorta sonkorta, xitaa marka cayriin, dhadhan fiican. Haddii midho cusubi, wax isbeddel ah ka dib karinta.
Waa mamnuuc in la soo iibsado miraha leh ur la cayimay. Murqaha aan fiicnayn wuxuu ka hadlayaa kiimikooyin badan oo shaqeynaya.
Xitaa hadhuudh badani waxay noqonaysaa mid casri ah oo jilicsan oo leh jimicsi wax lagu kariyo.:
Madaxa hore waa in la nadiifiyaa lakabka iyo caleenta, kala qaybsanaan kala badh oo ku shub walxo caano (biyaha iyo caano ee cabirka 1: 1). Si aad u adkeyso midhaha 2-4 saacadood.
Ka dib qoyso cobska ilaa 1 saacadood biyo diirran.
Ka dib markaa waxaad u baahan tahay inaad ku karsato cabbitaannada hab kasta oo la doortay.
Halkee laga bilaabaa iyo waxa aad u baahan tahay?
Marxaladda koowaad waa dharka iyo nadiifinta caleemaha. Ku kari miraha la gooyey ee caleemaha, ka dib markii ay ka saareen dusha sare iyo baaba'ay. Si aad u kariso, waxaad u baahan doontaa cabbacaad oo cabbirka isku mid ah - midhaha ayaa la kariyaa si siman. Maaddooyinka kale ee soo haray ayaa lagu doortaa iyadoo ku xiran qadarka la soo xushay.
Waxyaabaha ugu muhimsan ee muhiimka ah:
biyaha iyo dheriga dhoobada leh;
qaboojiyaha qaboojiyaha leh ee hooseeya;
caanaha, kareemka iyo saliidda qorraxda;
dhir udgoon, milix.
Sida loo karsado si aad u jilicsan oo casiir leh: cuntada sida caadiga ah
Waqtiga celceliska ee wax lagu kariyo cobs-tuubooyinka - 40-60 daqiiqo. Waqtiga kama dambaysta ah waxay kuxirantahay xajmiga miraha iyo habka loo doortay ee loo diyaariyey (sida adag u kariyo, hadhuudh adag, halkan ka akhriso). Xataa xitaa madaxyada ugu fiican ee kaabajka waxaa loo keeni karaa dhadhanka ugu wanaagsan, haddii aad raacdo xeerarka fudud. Si loo go'aamiyo in midhaha ay diyaar u tahay, waa ku filan tahay in lagu tijaabiyo 1 hadhuudh.
Sida caadiga ah waa in la kariyo cobsiyada hadhuudhka ee digsi:
Biyaha dabka qabsado. Inkasta oo ay ku dhufanayso - diyaariso Kob.
On the hadhuudhkii hore waxaad u baahan tahay inaad ka saarto caleemaha la qalajiyey, dhoobo cufan ama mugdi (haddii ay jirto).
Kaadi jarjar cabbitaanka biyaha kulul. Ka dib markii la karkariyo, yareeyo kulaylka si markaa hadhuudhku uu karkarayo karkar yar. Waqtiga wax lagu karsado - 50 daqiiqo. Mucarad aad u culus ayaa u baahan in la kariyo 1.5-2 saacadood.
Daawo fiidiyowga ku saabsan cunto karinta maqaayad badan oo ku jirta digsi:
Sida loo kariyo hadhuudhkii hore ee caanaha
Nidaam kale - karsaarda hadhuudhka laga helo caanaha. Tani waxay u baahan doontaa waxyaabaha soo socda:
nus koob oo caano ah;
1 tsp kareem culus;
2 tbsp. l subagga.
Waa maxay qaabka habka loo isticmaalo?
Ka hor intaadan karsamin karin. Karkari hadhuudh ah hab qiyaas ah 30-40 daqiiqo.
Ka saar miir ka madaxarrada la kariyey, ku shub caanaha iyo kareemka.
Cuntada ku kari ilaa 10 daqiiqo kulaylka yar.
Daadi subagga, si tartiib ah ugu darka badarka. Si adag u dabool daboolka, ku adkee 5-7 daqiiqo. Waxaad ku dari kartaa dhir udun dhadhanka.
Sidee kale ayaad u karisaa hadhuudh caano leh subagga, akhriso maqaalkan.
Cuntooyinka diyaarsan ee lagu diyaariyay boorsada qubeyska (dhammaan caleemaha lama soo saari karo). Ma'aha lagama maarmaan in la daboolo hadhuudh la karsado oo cusbo leh: waxay noqoneysaa mid aad u qallalan. Looma baahna dhir kale. Cunista duugistu waxay qaadan doontaa 40 daqiiqo.
Wax ka baro cuntooyinka kale ee loogu talagalay wax lagu kariyo hadhuudh khudradda labanlaaban.
Cabbirada la dubay - waa saxmada ugu fiican ee loo adeegsado cunto, iyo miiska guriga. Si aad u karineysid waxaad u baahan doontaa:
200 ml oo biyo ah;
50 g oo saliid ah;
Kuwa soo socda ayaa soo socda:
Waxaan ka saaro caleemaha iyo xajmiga, haddii loo baahdo - waxaan jebinaynaa madaxyada kaabash.
Iska ilaali digsiga, dhalaali saliidda (saytuunka ama kareemka).
Waxaan faafin midhaha, kor u dabka ilaa 2-3 daqiiqo - inta lagu jiro waqtigan abuur ah ayaa la xiiri doonaa.
Marka xigta, yareeyo kulaylka, ku shub biyo kuna dabool daboolka daboolka. Karkari ilaa diyaar. U hubso inaad jeesato.
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo kariyo hadhuudhka microwave:
Corn biyo ah. 4-5 diyaarinta cobsiyada ku rid weel biyo ah si ay ugu daboolaan dhammaantood. Ku dabool weelka daboolka, ku rid microwave, u dhig heerka celceliska awoodda iyo 45 daqiiqo ee waqtiga. Haddii madaxu adag yahay, ku dar biyo.
Cashada kariska ah. Madaxa Kaabashka waa in loo qaybiyaa 2-3 qaybood, ku rid saxan qoto dheer, daboolo caleemaha oo isku karsaaraya casiirkiisa u gaar ah 7-10 daqiiqo.
DAREEN: Diyaarinta miro badan, fursadani maaha mid ku habboon.
On sida ugu dhakhsaha badan u kariyo hadhuudhka ee microwave ee xirmada, waxaan u sheegay in wax noo.
Cuntadani waxay u baahan tahay warqad dubista iyo foorno.. Waxyaabaha ay ka kooban tahay:
2-3 cob iyo hal galaas oo biyo karkaraya.
Habka loo dubo hadhuudhka foornada:
Saliidda wax lagu kariyo saliidda.
Biyo raaci, ka tag caleemo dhuuban. Ku rid foomka kuna shub biyo.
Si adag ugu dabool faashad. Horay u samee 2-3 godad wareega hawada.
Ku rid foorno preheated (200-220 digrii). Kari 40-110 daqiiqo.
Sida loo kaydiyo la kariyay?
Shuruudaha ugu muhiimsan - bixinta qoyaanka. Karkarinta ka dib karinta, hadhuudh badan ayaa la doorbidi karaa inay ka baxaan digsi. - waxay xajin doontaa jilicsanaanta iyo casriyeynta kinnimada. Decoction qaboojiyaha leh cobs waxaa loo oggol yahay inay ku rid qaboojiyaha ilaa 1-3 maalmood.
Ku kaydi madaxyada kaabajka heerkulka qolka qolka wuxuu noqon karaa wax ka badan 10 saacadood. Cobs waa laga soo saari karaa biyaha, qaboojiyaa, ku duubaa filim duufaan ah ama lagu xiro weel hawo leh oo lagu rakibay qaboojiyaha. Nolosha shafka ah ee xaaladaha noocaan ahi maahan wax ka badan 3 maalmood.
Waxaad badbaadin kartaa miraha la kariyey ee qaboojiyaha. Si tan loo sameeyo, qaboojiso, qalaji, kuna buuxi kaabajka qaybaha khaaska ah. Bixi hawo xad dhaaf ah, si adag u xidh, u dir qaboojiyaha. Waxaad sidaan u dhigi kartaa 7 ilaa 10 bilood.
Qalab kale oo dheeriga ah ee kaydinta waa ilaalin. Homemade hadhuudhka qasacadaysan ee qasacadaysan waxay dhadhamisaa 2-3 sano.
Xitaa hadhuudh la kariyey waa hadho laga helo nafaqooyin iyo nafaqooyin badan. Dhererka waxaa ku jira jidhka, oo si fiican ugu weheliya waxyaabo kale oo aan keenin xasaasiyad. Corn waxa loo adeegsan karaa saxan dhinaca ama sida macmacaanka. Laga soo bilaabo maqaalka aad ka baratay sida loo kariyo hadhuudh badan, oo karinta miraha noocan oo kale ah waxay ku kala duwan yihiin waqtiga cuntada.